ပယ်လီယိုစင်း နှောင်းပိုင်း မှ လက်ရှိ
ပရိုင်းမိတ် မျိုးရင်းအချို့၊ အထက်မှ အောက်သို့။ ။ Daubentoniidae, Tarsiidae, လီမာ, မျောက်မောင်းမ, Cebidae, Callitrichidae, Atelidae, Cercopithecidae, Hylobatidae, ဟော်မင်နဒီ
ညီအမ မျိုးစဉ်: Dermoptera
လူသားမဟုတ်သော အခြားပရိုင်းမိတ်များ နေထိုင်ကျက်စားရာဒေသများ (အစိမ်းရောင်)
ပရိုင်းမိတ် (အင်္ဂလိပ်: Primates) သည် ဘူမိဗေဒ၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် မနုဿဗေဒအပါအဝင် ပညာရပ်နယ်ပယ်များမှ ပညာရှင်များနှင့် သုတေသီများ စိတ်ဝင်စားသည့် ကျောရိုးရှိသတ္တဝါ မျိုးစဉ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး လူသားများအဖြစ် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာမှု၏ မူလဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူသားမျိုးနွယ်များ၏ မူလအစကို ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် ပညာရှင်များသည် လူတူပရိုင်းမိတ် ရုပ်ကြွင်းများကို ရှာဖွေလေ့လာခဲ့ကြသည်။
“ပရိုင်းမိတ် (Primate)” ဟူသော ဝေါဟာရသည် လက်တင်ဘာသာ ‘ပရိုင်းမတ်စ် (Primus)’ မှ ဆင်းသက်လာကာ “ပထမဆုံး” ဟု အဓိပ္ပာယ်ရှိ၍ သတ္တလောကတွင် အသိဉာဏ်ပညာ ပထမဆုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့သည့် သတ္တဝါဟု ဆိုလိုသည်။ ပရိုင်းမိတ်တွင် အဆင့်နိမ့်ပရိုင်းမိတ်နှင် အဆင့်မြင့်ပရိုင်းမိတ်ဟုရှိရာ လူ၊ လူဝံ၊ မျောက်ဝံတို့သည် အဆင့်မြင့် ပရိုင်းမိတ်မှ ဆင်းသက်လာကြပြီး လူတူပရိုင်းမိတ် ဟုလည်း ခေါ်ဆိုသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အဆင့်နိမ့်ပရိုင်းမိတ်တွင် အံသွားသုံးချောင်းရှိပြီး အဆင့်မြင့်ပရိုင်းမိတ်တွင် အံသွားနှစ်ချောင်းပါရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တောင်စဉ်တောင်တန်းများနှင့် မြေသားထုသည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်သန်းပေါင်း ၅၀၀ မှစ၍ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူသားများဖြစ်လာမည့် ပရိုင်းမိတ်များ နေထိုင်ခဲ့သည့် အထောက်အထားများကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
၃ မြန်မာ့မြေပေါ်မှ ပရိုင်းမိတ်များ
၄ ပုံတောင်ဒေသမှ ပရိုင်းမိတ်များ
လူတူပရိုင်းမိတ် (Anthropoid Primate) အယူအဆများ[ပြင်ဆင်ရန်]
↑ Groves၊ C.P. (2005)။ Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M. (eds.)။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များ: မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် ပထဝီမြေမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းကျမ်း (တတိယအကြိမ် ed.)။ Baltimore: ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ် ပုံနှိပ်တိုက်။ pp. 111–184။ OCLC 62265494။ ISBN 0-801-88221-4။
↑ "The evolutionary radiation of plesiadapiforms" (in en) (2017). Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews 26 (2): 74–94. doi:10.1002/evan.21526. ISSN 1520-6505. PMID 28429568.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပရိုင်းမိတ်&oldid=743030" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၀ မေ ၂၀၂၂၊ ၀၇:၀၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။